ပင်မစာမျက်နှာ > QA
Sign-in-Thai.com, launched online business for6years, already has customers from over 120 countries and areas. We are the lifelong member of ISA and SGIA, and the verified user of PayPal as well as approved by BBB certification.
(2) Get the bank account information of Sign-in-Thai.com;
Receiver’s First name: GUANGJU
Receiver’s Last name: FENG
Related links: http://www.sign-in-thai.com/info/ChangesandReturns.html
For the items other than consumable products sold via www.Sign-in-Thai.com, we provide 12 months warranty after shipment. All the extra parts for equipment can be purchased from www.Sign-in-Thai.com. Further, for our VIP customers, the period of warranty shall be extended to 18 months.
For more information, please refer to “Customer Service & Warranty” on our website www.Sign-in-Thai.com
Related Links: http://www.sign-in-thai.com/info/QualityWarranty.html
ကျွန်ုပ်တို့၏၀န်ဆောင်မှု: လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဒေါင်းလုခ့် ကတ်တလော့များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု အလွန်ကောင်းမွန်သောအမြင်ရှိသော ၀န်ဆောင်မှု
©2006-2021 ပေကျင်း ChinaSigns သတင်းအချက်အလက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ ရပိုင်ခွင့်များအားလုံးအား သီးသန့်ချမှတ်ခဲ့သည်
www.Sign-in-China.com, ပေကျင်းသို့ သက်ဆိုင်သောသg ChinaSigns Information Co., Ltd. is the biggest online supplier of sign products in the world and specialized in providing One Stop Solution for customers to select AD equipments, AD consuming materials, sign exhibition products, etc.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် ၆ခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံခြားရုံးခွဲများအား ဖွင့်လှစ်ထားသောအတွက် သူမသည် တရုတ်ပြည် မှင်စက်ကလေးများဖြင့်ပုံနှိပ်သောအဖွဲ့အစည်းမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံရပ်ခြားဝန်ဆောင်မှု စင်တာလည်းပဲဖြစ်ပါသည်။
Oကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကြော်ငြာနှင့်ဆိုင်းဘုတ်နယ်ပယ်တစ်ခုလုံးအား လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ဝေသောထုတ်ကုန်များအားလုံးအား နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံချိန်စံနှုန်းများအရပြုလုပ်ထားပါသည်။ရလာဒ်အနေဖြင့် လက်ရှိတွင်ရောင်းချရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အွန်လိုင်းထုတ်ကုန်ပေါင်း ၉၀၀၀ကျော်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ယ်ယူမှုအားစုထိန်းထားသော အကောက်အထည်အားဖော်ဆောင်ထားသောကြောင့် ထုတ်ကုန်များအားလုံးအား အများနှင့်ယှဉ်၍ရသော ဈေးနှုန်းများသာသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဒါ့အပြင်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏၀န်ဆောင်မှုများအား တရုတ်နိုင်ငံမှင်စက်ကလေးများဖြင့်ပုံဖော်သော အသင်းအဖွဲ့မှလည်းပဲ အာမခံထားပါသည်။